UDonald Trump ufuna "ukukhupha" uLina Dunham, u-Whoopi Goldberg noRosie O'Donnell wase-US
UDonald Trump uthe akayi kucinga ukuba uLina Dunham, u-Whoopi Goldberg kunye noRosie O'Donnell bafudukela kwelinye ilizwe xa bephumelele uhlanga lomongameli. Umviwa ovela kwiPublic Republic Party wamemezela oku ngokuthetha ngentetho yomxholo.
Akunabo bonke abadumileyo abafuna ukubona uDonald Trump oneminyaka engu-69 njengomongameli waseMerika. Ngaphambili, uLena Dunham, u-Whoopi Goldberg noRosie O'Donnell, bexubusha imeko yezopolitiko, bachaza uluvo lwabo ukuba ngaphambi kokutshatyalaliswa kwe-tycoon ekhwabanisayo. Ama-actresses athi awakwazi ukuhlala e-US ukuba iTrump yaba yinkokheli yelizwe.
Ngokwe-Dunham eneminyaka engama-29 ubudala, ezi zinto aziyizisongelo ezingenanto. Wayecinga malunga nazo zonke iindlela kwaye sele sele ukhethe ilizwe ukuhamba. Intombazana iya kuhlala kwiVancouver, eCanada kwaye ifunde imarike yendawo yokuhlala.
Ngokubhekiselele kwi-Goldberg eneminyaka engama-60 ubudala, wongezelela ngenxa yokuba yena, njengesiMerika, ayikho into emnandi ukuqonda ukuba abanye abaviwa bayalibala ngamalungelo, inkululeko yemilinganiselo kunye nokutsala i-US kwixesha elidlulileyo. Akafuni ukusinda kwingcinezelo eyawa kwinqanaba lookhokho bakhe, mhlawumbi, ixesha lifikile ekuphumeni kwakhe ekhaya.
Iimpawu ezimnandi kunye ezimnandi kunye nee-intanethi ezivela kumtshato wePrince Harry kunye noMegan Markle!
Ukuhlaselwa kwakhona: UDonald Trump ukhohliwe ukuvuyela esidlangalaleni uMelania Trump kuMhla kaMama
UMongameli wokuqala waseUnited States uMelania Trump waxhatshazwa kwintsebenzo enzima kwizintso
"Ulungele lonke ilizwe"
Yile ndlela uDunham noGoldberg bachaza ngayo ukunyuka kwesigidigidi somntu ocebileyo ngokuza kwiFox & Friends show. Ngokutsho kweTrump, owokuqala ngumdlali wesantya wesibini ngaphandle kobuhlungu, kwaye ukufuduka kwe-Whoopi kuya kunceda lonke ilizwe. Lo mbono wakhuthazwa kakhulu ngumgaqo-nkqubo kwaye uya kuba yinkokheli yaseMerika kwaye anike bonke abemi base-USA inkonzo enkulu.
Ngentetho yakhe, uTumpump akazange ayibale ngo-Rosie O'Donnell oneminyaka engama-54 ubudala. Wongezelela ukuba "uyamthanda" kwaye uya kuvuyela ukumbulala. Ngendlela, kunyaka odlulileyo ngexesha lempikiswano, njengendoda enyanisekileyo, wabiza umphathi weTV ebizwa ngokuthi "ingulube enqatha".
UJennifer Garner wafaka umtshato kunye noBen Affleck
Umculi uGwen Stefani usephambili!
UMark Zuckerberg ufumene ibhaso ekutyunjeni "iprojekthi ye-intanethi" ... eKazakhstan
UCristiano Ronaldo unokubona imifanekiso kaKendall Jenner
UChris Hemsworth wasweleka e-Himalaya
Kwintengiso, ungathenga umnyango wamagumbi, apho wayehlala khona uJimi Hendrix noAndy Warhol
U-Fan 1: U-Jessica Biel uxele kuYustin Timberlake ngothando
ULuc Besson uhlwaywa ngenxa yokunyaniseka
UDiane Kruger wathandana nomfana owayengumfana uKirsten Dunst?
I-Shakira Theron ibonise ibhokhwe yakhe kwixuku lesibini
UJennifer Lawrence noDarren Aronofsky babonwe ngethuba le-premiere ye-movie "Mama"
UChrissie Teigen wayegxeke, egqoke ingubo egqityiweyo
Ubomi bomntu wobomdlali uRichard Armitage
UKumkani uElizabethe II kunye nentsapho yakhe bavakashela iPiknic yePatron's Lunch
Yintoni ebonisa intsasa ye-ultrasound?
I-patchwork eyenziwe ngee jeans endala
Iimpawu zeeNwele kunye nee-curls zeenwele ezinde
Ukunyameka kwe-endometrium kuyinto evamile
Ama-noodle aseTshayina - iindlela zokupheka zokuqala zokutya ezidliwayo zase-Asia
Iikhiwane ezomileyo - umxholo wekhalori
Iintlobo ezininzi zeenja
Ikhukhi kwi-kottage cheese - iresiphi
Izinto ezichaphazela ukubunjwa kobuntu
Ukubhaliswa kweklasi ngoSeptemba 1
Umntwana uqala nini ukuhamba?
Scraper yokuhlamba iifestile
U-Kendall Jenner uvume ukuba uhlala ecinga ukuxhalaba nokuxhalabisa
Uyilo lwezitebhisi endlwini yangasese
Umyalelo wokuxothwa kwintando
Ubunzima - njani ukuphumeza?